Banijya News | पूर्व स्वास्थ्य सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठको निधनः रुघाखोकी लाग्दैमा कसरी भयो त निधन ? - Banijya News पूर्व स्वास्थ्य सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठको निधनः रुघाखोकी लाग्दैमा कसरी भयो त निधन ? - Banijya News
पूर्व स्वास्थ्य सचिब शान्तबहादुर श्रेष्ठको निधनः रुघाखोकी लाग्दैमा कसरी भयो त निधन ?
काठमाडौँ, १० पुस । पूर्व स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठका उपचारका क्रममा आज विहान ७ः ५५ बजे त्रिबि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निधन भएको छ । उपचारमा सम्लग्न डा निरज बमले पूर्व सचिव श्रेष्ठको निमोनिया, सेस्पिस भएको कारण निधन भएको बताए ।
एक साता अघि सामान्य रुघा खोकी लागेपछि श्रेष्ठको उपचार भक्तपुरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा गरिएको थियो । तर त्यहाँ निको नभएपछि उनलाई मंगलबार बेलुका महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक अस्पताल ल्याइएको थियो । मुटु सम्वन्धी समस्या नदेखिएको तर अवस्था एकदमै विग्रदै गएपछि सोही दिन राती नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा सारिएको थियो । हिजो विहानै उनलाई कृतिम श्वासप्रश्वास भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । रुघाखोकी लागेर अस्पताल भर्ना भएका पूर्व सचिबको अकास्मतको निधले सबैलाई आश्चर्य बनाएको छ ।